"La Parra", ukhenketho lwasemaphandleni. Ikhaya lakho eparadesi. - I-Airbnb
"La Parra", ukhenketho lwasemaphandleni. Ikhaya lakho eparadesi.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJesus
UKUZOLA, UKUZOLA KUNYE NENDALO
Ilitye elipholileyo, ikalika kunye nendlu yomthi. Uhlangulwe kwixesha elidlulileyo ukuze ukonwabele kwaye uphile iintsuku ezimbalwa ezizele uxolo noxolo.
Inendawo yabantu ababini, inegumbi lokuhlala elinendawo yomlilo, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kumgangatho wokuqala.
Igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela, elikwi-attic entle, likhokelela kwithafa ukusuka apho unokonwabela iimbono ezimangalisayo zeGenal Valley.
ILa Parra isawugcina undoqo wendlu yesiko edolophini kuba iyindlu ebuyiselweyo eneminyaka engaphezu kwe-100.
Siye sanyamekela kakhulu umhlobiso kunye neenkcukacha ukwenzela ukuba uzive indlu njengendawo egcwele amandla, uxolo noxolo, konke oku kukunyamekela ingundoqo yekhaya lasemaphandleni elibonakala liyeke ngexesha. Iindonga zayo zamatye, iisilingi zayo zomthi okanye iziko elifudumeleyo, zikwenza uzithuthele kwenye indawo, kwelinye ixesha.
Indawo yokuhlala imalunga ne-25 square metres ngomgangatho (imigangatho emibini kunye nethafa), yindawo epholileyo enayo yonke into oyifunayo ngeentsuku zakho apha. Iifoto zendawo yokuhlala zithathwa nge-"Fisheye" lens kwaye inokunika imbonakalo ye-amplitude enkulu. Kodwa kubalulekile ukuba uyazi ukuba indlu i-25 square metres kunye nomnye wemigangatho yayo ekhaya.
Indlu ibekwe kwindawo ephezulu yedolophu ukusuka apho iimbono zehlathi le-chestnut kunye ne-Genal Valley ziyinyameko yokwenene yeemvakalelo. Ukusuka kwiifestile uya kubona iparadesi emangalisayo egcwele iintaba kunye nendalo apho unokuhamba kwaye ujabulele.
Yiba isilayi sesonka sakusasa nekhandlela, wonwabele isidlo nekhandlela kwi kwenye wethu, ukuhamba kwizitrato dolophu, kunandipha isibhakabhaka enkulu oluhlaza, uhambe ecaleni bentaba ezahlukeneyo, benze eminye imidlalo adventure, bonwabele iphunga I-oveni yedolophu ebaswa ngamaplanga okanye ukudibana nomthendeleko wamaMoors kunye namaKristu, yenza ukuchitha iintsuku ezimbalwa eLa Parra naseBenalauria ibe lusuku olukhethekileyo.
4.97 · Izimvo eziyi-276
Indlu ibekwe kwindawo ephezulu yedolophu, iimitha ezimbalwa ukusuka kwisikwere esikhulu.
Idolophu ngokubanzi izolile, ijikelezwe luxolo, ukuzola kunye nendalo. Akunto ingaqhelekanga apha ukuvuswa kukuntyiloza kweentaka okanye ukuchitha iiyure neeyure kuthe cwaka.
Ukuzola kobona butyebi bugqwesileyo be-Benalauría, ukongezelela indawo apho indlu ikhoyo izolile, akukho nakuphi na ukugcwala kunye nengxolo.
Abamelwane, abaqhele ukwamkela iindwendwe, ngabamkeli abahle kwaye baya kukwenza uzive ungomnye wabantu abalapha.
Ukuqhuba eBenalauría kunokuba nzima. Izitrato zintle kakhulu kodwa zikwamxinwa kakhulu. Ngethamsanqa kukho iipaki ezimbini zeemoto apho unokushiya imoto yakho, enye yazo ingaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka endlwini.
Uninzi lwamashishini kunye namaziko edolophu akawamkeli amakhadi etyala, sicebisa ukuba uze nemali. Eyona ATM ikufutshane yimizuzu eli-15 ukusuka edolophini.
Okwangoku iBenalauría ineevenkile ezi-3 apho unokuthenga khona yonke into oyifunayo ngeentsuku zakho apha ngalo naluphi na usuku lweveki. Kukho neenkonzo ezininzi zokuthengisa ezitalatweni.
Ungayonwabela imivalo emi-2, enye kumbindi wedolophu kwaye enye kwindawo yokuqubha kamasipala (i-1.5 km ukusuka endlwini). Kwakhona kunye ne-winery enikezela ngenkonzo yendlela, ukutyelela ngasese (ugcino lwangaphambili) kunye nokuthengwa kwewayini emnandi eyenziwe yasekhaya.
Idolophu igcwele iindlela kunye neendlela zokuhamba ezintabeni kwaye ufumane iikona ezikhethekileyo apho unokuzijikeleza khona kunye nemvisiswano kunye nendalo.
Ndihlala edolophini, ndizalelwe apha kwaye ndizakubakhona ukuze ndikuncede ngayo yonke into oyifunayo. Ndiyakuthanda ukwabelana ngokundingqongileyo, idolophu yam kunye nendawo yam yokuhlala nabantu. Ndifuna ukuba ufumane eyona ndawo intle yale ndawo intle, iimfihlo zayo kunye neendawo ezindenza ndithandane nale ndawo ngakumbi imihla ngemihla.
Ndizama ukwenza ukuhlala kwakho apha kube yeyona nto isondeleyo ekuziveni usekhaya. Uya kuba luncedo lwam ngexesha leentsuku zakho apha kunye nangeentsuku zangaphambili.
Ndiyathanda ukucebisa ngamathuba abonelelwa kokusingqongileyo kunye nezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi, unokundibuza yonke into oyifunayo, unokuthembela kuncedo lwam ngamaxesha onke.
Siza kuzama ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Ndihlala edolophini, ndizalelwe apha kwaye ndizakubakhona ukuze ndikuncede ngayo yonke into oyifunayo. Ndiyakuthanda ukwabelana ngokundingqongileyo, idolophu yam kunye nendawo yam…
Inombolo yomthetho: VTAR/MA/00413
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Benalauría